အမျက်ဒေါသကိုခန္ဓာကိုယ်မှတစ်ဦးအဆိပ်အတောက်ဖြစ်ပါတယ်။ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » ကနျြးမာရေးသတင်းများ • ကောင်းသောအလေ့အထများ • ကျွန်မရဲ့ကျန်းမာရေး • စောင့်ရှောက်မှု "ဒေါသဟာခန္ဓာကိုယ်မှတစ်ဦးအဆိပ်အတောက်ဖြစ်ပါတယ်။
Eliséoမင်းသမီး Emma Kamgang 12 မတ်လ 2019
Tagesကျနော်တို့မွေးဖွားကျနော်တို့ပြီးသားအမျက် ထွက်. သယ်နေကြသည်။ အဆိုပါa ကြောက်ရွံ့သောစိတ် et la နာခြင်းဒါ့အပြင်။ ဤရွေ့ကားစိတ်ခံစားမှုမသက်ဆိုင်တဦးတည်းမွေးသောအရာအတွက်အခွအေန, တိုင်းလူသားနှင့်အတူမွေးဖွားလာနေကြပါတယ်။ ကလေးမွေးဖွား မှစ. ဤပုဂ္ဂလဒိဋ္ဖြစ်ရပ်မှန်များတစ်ခုချင်းစီပုံဖော်ပါလိမ့်မည်နှင့် armature ပတ်ဝန်းကျင်ကျော်ယူပါလိမ့်မယ်။
အမျက်ဒေါသကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်။ သူတို့ကတချို့မျက်ဒေါသများအတွက်မျိုးရိုးဗီဇသို့မဟုတ်ယားယံခြင်းမှလူသား၏အရှိဆုံးအဖျက်လုပ်ရပ်များမှဦးဆောင်သောမျက်စိကန်းသောစိတ်အားထက်သန်မှုအထိ။ ဒါဟာတကယ်တော့တစ်ခုဖြစ်တယ် စိတ်ခံစားမှု Les ကျနော်တို့ခံစားရတယ်နိုငျသောပြင်းထန်သော။ အများဆုံးအန္တရာယ်တစ်ခုမှာလည်း။ ဒါဟာပေါကျကှဲသို့မဟုတ်နှိမ်နင်းသည်ကနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ကိုစေမည် မကျန်းမမာသော.
လူ့ဖြစ်လျက်ရှိအရှင်တို့သည်ကြီးစွာသောဝိရောဓိတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသည်။ သူကဖြစ်ပျက်သမျှ, အမျက်ဒေါသခံစားရပါတယ်။ ဒါဟာမိမိကိုမိမိ၏ဤအပိုငျး mutilate ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒါဟာနေဆဲနာမကျန်း, ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်၏အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲဖို့သင်ယူရပါမည်။ သတငျးကောငျးကိုဒီဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအပြုသဘောအမျက်ဒေါသချန်နယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ယှဉ်ပြိုင်, ဆောင်ရွက်ရန်ယူ. အန္တရာယ်များထိုသို့ပြုမှအားလုံးနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ကျရှုံးလျှင်မူကား, ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကအကျိုးဆက်များပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
အားလုံးရောဂါများစိတ်ခံစားမှုအစိတ်အပိုင်းများရှိသည်အပြင်းအထန်တောင်းဆိုသောသမားရိုးကျအခြားရွေးချယ်စရာဆေးဝါးနှစ်ဦးစလုံး။ ယင်းချဉ်းကပ်မှု၏ရှုထောင့်ကနေ ဘက်စုံ, ရှိသမျှရောဂါတစ်ခုမဖြေရှင်းနိုင်စိတ်ခံစားမှုဖြစ်ပါသည်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုသည်၎င်း၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိသောအခါ, သိသိသာသာကျန်းမာရေးဆိုးရွားများနှင့်ပင်အသေခံဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဤရွေ့ကားအလားအလာတစ်ဦးချင်းစီစိတ်လှုပ်ရှားမှုခန္ဓာကိုယ်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပေါ်သက်ရောက်မှုကဖော်ပြသည်။ အမျက်ဒေါသ၏အမှု၌, အဲဒါကိုအဓိကအားတစ်ခုလုံးကိုစည်ဧရိယာနှင့်အစာအိမ်ထိခိုက်စေသောလူသိများသည်.
အမျက်ဒေါသပုံစံအမျိုးမျိုးကြာပါသည်။ စသည်တို့ကိုမကျေနပ်မှု, ခါးသီးမှု, မုန်းတီးမှု ဤသူအပေါင်းတို့သည်ပုံစံများကိုနောက်ဆုံးမှာကျန်းမာရေးသက်ရောက်မှု generate ။ တကယ်တော့, သူကပြုမူgallstones, သည်းခြေနှင့်ဆိုင်သောပြဿနာများကြောင့်နောက်ဆုံးမှာကျမှုကိုထငျရှားအစစ်အမှန်အချိန်ဗုံးမ နှင့်အမျိုးမျိုးသောအစာခြေပြဿနာများကို။
မှသုတေသီ အိုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုများ မကြာသေးမီကခန္ဓာကိုယ်အပေါ်အမျက်ဒေါသ၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်စစ်တမ်းတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် အမေရိကန်တွင်လည်းမီးဖိုထဲအသင်းဂျာနယ်။ ထိုသို့စစ်ဆေးအတည်ပြုခဲ့သည် အမျက်ဒေါသအားဖြင့်လွှမ်းနေသောလူမျိုးသည်အလောင်းတွေ၌ဤစိတ်လှုပ်ရှားမှုလက္ခဏာကိုပြသလေ့ရှိပါတယ်.
ဒါဟာအမျက်ထွက်ရသောသူတို့ကိုလည်းမကြာခဏ carotid သွေးလွှတ်ကြောများတွင်မူမမှန်ရှိသည်ဖို့လေ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ဤသည်သိသာထင်ရှားစွာပင်လေဖြတ်မှုအန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေပါသည်။ အလားတူပင်ကဇာတ်ကောင် type ကို "ရန်" ရှိသူတို့, ဆိုလိုသည်မှာ High-ပဋိပက္ခယေဘုယျအားဖြင့်သွေးလွှတ်ကြောနံရံများတစ် thickened ရှိသည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ထိုမှတပါး, မည်သည့်ပိုလျှံအမျက်ဒေါသအချို့သောဟော်မုန်းများထုတ်လုပ်မှုအတွက်မြင်နိုင်တိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းတို့အနက် adrenaline။ ဒီဥစ္စာအတွက်တိုးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟန်ချက်အတွက်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်စေသည်နောက်ဆုံးတွင်နှလုံးတိုက်ခိုက်မှုသို့မဟုတ်ဦးနှောက်မမှန်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။
ဆံ့ ... မသူမ၏ထိန်းချုပ်မှုယူစေနှင့်
ကျနော်တို့ဘာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအမျက်ထွက်ရဖို့နေ့စဉ်အများအပြားအကြောင်းရင်းများ, ရှိသည်။ အဘယ်အရာကိုမျှဿုံအလုပ်ဖြစ်တယ်နှင့်ပဋိပက္ခနှင့်မျက်ဒေါသငါတို့နေရသောနေ့ရက်ကာလ punctuate ။ ငြင်းပယ်ခံရခြင်းနှင့်ယားယံဤခံစားချက်များကိုချန်နယ် ပထမဦးဆုံးအရာကျွန်ုပ်တို့အမျက်ဒေါသကိုတွေ့ကြုံခံစားကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့တကယ်တော့ပြီးသားအမြော်အမြင်ရှိရှိရုပ်သံလိုင်းအဘို့အခွင့်အလမ်းသည်သူ၏စွမ်းအင်ကိုတိုးပွားစေ.
ကျနော်တို့အစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း ဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုကွဲပြားခြားနားသောရှုထောငျ့ရှိပါတယ်။ လေးယောက်အခြေခံအားဖြင့်ရှိပါတယ် :
အမျက်ဒေါသ "ကူးစက်တတ်" သို့မဟုတ်အခြားမှလူတစ်ဦးကနေပြောင်းရွှေ့
အဓိကအားလေးရင်းမြစ်များမှအမျက်တော် ထွက်. ဖြစ်စဉ်ကို: ကြောက်ရွံ့ခြင်း, ပျက်ယွင်းစေခြင်း, သံသယများနှင့်ဒုစရိုက်ဖြေ။ အမျက်ဒေါသမကွောကျရှံ့သောမဟုတ်သလိုစိတ်ပျက်သို့မဟုတ်သံသယသို့မဟုတ်အပြစ်ရှိတယ်ဖြေရှင်းမပေးပါဘူး။ ကိုယ်ကသာသူတို့ကိုအန္တရာယ်ထွက်ပေါက်ကိုဆက်ကပ်။ ဒါဟာတဒင်္ဂဖြန့်ချိတဲ့ခံစားမှုထုတ်လုပ်ပေမယ့်ပြဿနာများ၏အကြောင်းတရားများဖယ်ရှားပစ်မထားဘူး။ ဒါဟာအစကကိုယ်နှိုက်ကကျွေးမွေးသောတိုး။ လေးစေသောအခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်။ ငါတို့သည်ကြောင့်ပြင်းထန်လာကြောင်းဒါကြောင့်ထိန်းချုပ်ရန်များမှာလျော့နည်းဖွယ်ရှိပိုပြီးအမျက်ဒေါသခံစားရတယ်။ ဤသည်ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဖြေရှင်းချက်မဖိနှိပ်ဖို့မဟုတ်သလိုထိန်းအကွပ်မရှိလွှတ်ပေးရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါလမ်းကြောင်းကိုဝိညာဏ်၏မကျြနှာကိုဖော်ထုတ်ကျနော်တို့အမျက်ဒေါသခံစားရကြောင်းကိုလက်ခံရန်ဖြစ်ပါသည်။ သူမသည်ရေပိုင်နက်ပြဿနာဖြေရှင်းရန်မှစတင်ခဲ့သည်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ရုံ 10 စက္ကန့်။ ဒါဟာအမျက်၏အစစ်အမှန်အရင်းအမြစ်သည်အဘယ်အရာကိုဖေါ်ထုတ်ရန်ကြိုးစားပြီးတော့လိုအပ်ပေသည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ကွယ်မှကြောင်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဘယ်လိုပေါ်သဲလွန်စကိုပေးသည်။
အရင်းအမြစ်: https: //nospensees.fr/colere-toxine-corps/
အန်း Marivin / "ဟာအရေပြားအောက်မှာ": "ကျွန်မရဲ့ဇာတ်ကောင်ဟာရာဇဝတ်မှုအဖြစ်တာအဖြစ်ကင်ဆာတိုက်ဖျက်"
1991 ကတည်းက Montcornet အတွက်ကြောင့်ကင်ဆာလူနာတွေကိုကူညီပေးသည်